B2B Universal Marketing Universe | Martech Zone
B2B Universal Marketing Universe
Zoma, Septambra 28, 2012 Douglas Karr
B2B Marketing ara-tsosialy dia mitaky fananganana fisian-toerana sy fitomboan'ny fahefana eo amin'ny sehatry ny indostriao. Ireo orinasa B2B izay mampiasa tetikady mahery setra hananganana ny fisian'izy ireo amin'ny Internet amin'ny sehatry ny fiaraha-monina dia ekena ho mpitarika eritreritra ary ny orinasa manaraka dia mitondra orinasa. Mahalana aho no mahita orinasa B2B mipoaka amin'ny fitomboana nefa tsy manana tetikady marketing ara-tsosialy amin'ny toerany. Ary nahita orinasa B2B marobe niady mafy aho satria tsy nanana iray.
Ireo orinasa mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fampidirana singa ara-tsosialy amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo dia manome hery ny mpanjifa sy ny vinavinany hizara amin'ny tambajotran'izy ireo mandritra ny fananganana fanentanana marika. Ity fandefasan-kafatra am-bava ataon'ny namana ity dia tena atokisana ary tena mandaitra amin'ny fanamafisana ny fiantraikan'ny fampielezan-kevitrao.
Ao amin'ny infographic misy azy ireo, ny B2B Universal Marketing Universe, Marketo mandinika ireo singa amin'ny fampielezana marketing ara-tsosialy B2B mahomby.
Tags: b2bb2b mitarika taranakab2b marketingtambajotra b2bvarotra b2bisa sc2 bXNUMXb
Fivarotana an-tsokosoko lasa tonga mitovy amin'ny Virtual Stores fivarotana